I-Red Yeast Rice Extract (i-RYRE) izongezo- i-Wisepowder
Yintoni iRed Yeast Rice Extract
Ikhupha irayisi ebomvu (I-RYRE) yenziwa xa uhlobo oluthile lobumba olwaziwa ngokuba yiMonascus aimureus lufumba irayisi. Irayisi ijika ibemnyama ibomvu kwaye ivelise ichemicals eyaziwa ngokuba yi-monacolin K enexabiso lonyango. I-RYRE ibiyinxalenye ye-TCM (amayeza esiTshayina esiqhelekileyo) ngaphezulu kwe-10 leminyaka. Okwangoku, kuthengiswa njengesiongezelelo nanjengekutya kwezempilo kwihlabathi liphela.
Njani Umsebenzi WeRegayisi ebomvu uyawususa umsebenzi
I-enzyme yeHMG-CoA yokunciphisa ngokutsha yinto ye-enzyme eguqula iimolekyuli eyaziwa ngokuba yi-HMG-CoA ibe mevalonate. Ikhompawundi iMevalonate sisiseko esibalulekileyo sokwakha i-1000s yezinye iimolekyuli, ezinje nge-cholesterol. IMonacolin K isebenza ngendlela efanayo ne-lovastatin kuba ibopha i-HMG-CoA reductase yokuthintela ukuveliswa kwe-cholesterol.
I-Mevalonate inokuguqulwa ibe yimolekyuli ebalulekileyo njenge-coenzyme Q10 esebenza njenge-antioxidant.
I-RYRE iqulethe ezinye iikhompawundi ukongeza kwi-monacolin K. Ikwanayo nendlela entsonkothe ​​ngakumbi xa kuthelekiswa ne-lovastatin. Ngokwenzululwazi, ezinye izinto zerayisi ebomvu zingathoba umngcipheko weziphumo ebezingalindelekanga ezibangelwa yi-monacolin K. njengobuthathaka bemisipha.
Ngaba iRayisi yeRed Red ayikhuphe isiyobisi okanye isixhasi?
Ukukhupha irayisi ebomvu kungafakwa kumachiza omabini kunye nesongezelelo. Kungenxa yokuba esinye sezona zithako zibaluleke kakhulu ekukhutsheni irayisi ebomvu yi-monacolin K. Ikwabizwa ngokuba yi-lovastatin olilungu elisebenzayo kwisiyobisi esikhutshwayo esibizwa ngokuba yiMevacor. Ke, i-RYRE kwicala elinye sisongezelelo esincedisa ukwehlisa i-cholesterol ngelixa kwelinye icala, umenzi weziyobisi we Mevacor ubanga ukuba inamalungelo obunini obunini obunikazi kwisithako se-lovastatin.
Isithako se-lovastatin kwisirayisi ebomvu irayisi ikwachazwa njengechiza lokumisela ngu-FDA. Kungenxa yoko le nto i-RYRE idityaniswa ngokudibeneyo njengechiza kunye nesongezelelo.
Izibonelelo zeRegion ebomvu ebomvu
Kuxoxwe ngezantsi ezinye zezi izibonelelo zerhasi ebomvu
Irayisi ebomvu irayisi ikhupha isezantsi kweCholesterol
Inqanaba eliphezulu le-cholesterol embi yimicimbi yezempilo enxulumene nokukhuluphala, isifo seswekile ukunganyangeki, ukubetha, uxinzelelo lwegazi kunye nokuhlaselwa yintliziyo. Enye yezona ndlela zisebenzayo zokulawula inqanaba le-cholesterol embi kunye nokukhusela umzimba wakho kule mingeni yezempilo kukuthatha ukutya okunempilo kunye nendlela yokuphila esebenzayo. Nangona kunjalo, abantu abambalwa banokuthi bathambekele kumanqanaba aphezulu e-cholesterol embi ngaphandle kokuthatha la manyathelo.
I-red yeast irayisi ikhupha i-cholesterol yokulawula isiphumo esivela kumandla ayo okunyusa i-HDL (cholesterol elungileyo) egazini kunye nokwehla kwe-triglycerides kunye ne-LDL (cholesterol embi). Ukukhutshelwa kwerayisi ebomvu kunye nezongezelelo kuthintela ukuzuza kwesisindo kunye nokugcina amanqanaba aqhelekileyo e-leptin kunye nee-enzymes.
Kuphando olongezelelekileyo olubandakanya phantse abathathi-nxaxheba abangama-8,000, abantu abathathe iRed yeast yeediliya ezongeziweyo baye banciphise i-LDL (cholesterol embi) kunye ne-cholesterol iyonke. Abakhange bafumane monakalo kwimisebenzi yezintso okanye yesibindi.
Irayisi ebomvu ilususa ukuvuvukala kwabantu abasezantsi
Usulelo yindlela eqhelekileyo yokuphendula ukungakhuseleki kwethu eyilelwe ukukhusela imizimba yethu kwizixhobo zangaphandle kunye nosulelo olunamandla.
Ukusuleleka ixesha elide kunokukholelwa ukuba kubangela iimeko ezingapheliyo njengesifo sentliziyo, isifo seswekile kunye nomhlaza. Uphando lubonisa ukuba ukuthatha iziselo zerayisi ezibomvu (iRYRE) inokukunceda ukuthoba usulelo kunye nokuphucula impilo yexesha elide.
Umzekelo, uphando olubandakanya abantu abangama-50 abanesifo se-metabolic esingqina ukuba ukuthatha ubisi lweerayisi olubomvu kunye nokukhupha umnquma kunciphise amanqanaba oxinzelelo kunobangela wokukrala okungapheliyo ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-20.
Ngokufanayo, olunye uphando lwezilwanyana luye laqonda ukuba iigundwane ngomonakalo wezintso owakhutshwa ngerayisi ebomvu ekhupha umgubo wehlisa umgangatho wamanqanaba eeproteni ezinxulumene nokuvuvukala.
Isithambisi seerayisi ebomvu sinezinto zeAnticancer
Obunye ubungqina obuvela kwizilwanyana nakwizifundo zeselula bukungqina ukuba ukukhutshwa kwerayisi ebomvu kunganceda ekunciphiseni ukwanda nokukhula kweeseli zomhlaza. Olunye uphando lwacebisa ukuba ukunika iigundane ezinomhlaza we-Prostate yomhlaza obomvu kunye nomgubo ocolekileyo wehle umthamo we tumor xa kuthelekiswa neqela elilawulayo. …
Uphando lwe-tube-tube luye lwaveza ubungqina bokuba ukusebenzisa i-red yeast irayisi ekhupha umgubo kwiiseli zomhlaza wesifo somhlaza kuyehlisa ukukhula kweeseli zomhlaza kwinqanaba elikhulu kune-lovastatin.
Ukukhupha irayisi ebomvu Kuphucula i-Bone Health
Kwisifundo esinye esibandakanya iimpuku, irayisi ebomvu ekhupha umgubo wethoba ithambo ilahlekile ngeempuku. Iimpuku zinikwe irayisi ebomvu ebomvu ineeseli ezinempilo kunye nobunzima bamaminerali obuninzi kune-placebo.
Ukukhupha irayisi ebomvu kukhulisa intetho yeBMP2 yemfuza, ebaluleke kakhulu ekuphilisweni kwamathambo.
I-Rosa ye-Red Yedrayisi ekhupha isithako
Khumbula ukuba isixa sesithako esibaluleke kakhulu esaziwa ngokuba yi-monacolin sinokuhluka kwisongezelelo sesiraphu seediliya. Kungenxa yokuba kukho iintlobo ezahlukeneyo zegwele kwaye kusetyenziswa iintlobo ezahlukeneyo zento yokubila. Uphando malunga nemveliso yeerayisi ebomvu eyahlukileyo eyongezelelweyo ivelise ukuba umxholo we-monacolin ukusuka kwi-zero ukuya kwi-0.58 pesenti.
Nangona izifundo ezahlukileyo ziphakamise imvubelo ebomvu irayisi, awunakuxela ukuba uphawu olisebenzisayo luya kuba nomxholo owaneleyo we-monacolin. Kuyimfuneko ke ngoko ukuba uhlale ujonga umxholo we-monacolin yesongezelelo ngaphambi kokuthatha isigqibo malunga nokuba yintoni idosi yerayisi ebomvu ukusebenzisa.
Kwi-TCM (amayeza amaTshayina esiTshayina), idosi ebomvu yerhasi ebomvu inokuphakanyiswa iphezulu. Nangona kunjalo, ezinye izifundo zisebenzise i-yeast red irayisi ukukhupha idosi engama-600 mg kane ngosuku. Olunye uphononongo lukwacebisa ukuthatha irayisi ebomvu irayisi ikhuphe i-1200 mg kabini ngemini.
I-Red Yeast Rice Extract Side Side
Ukuxoxwa ngezantsi ezinye zeempembelelo zeerayisi ebomvu;
Kubantu abaninzi, irayisi ebomvu ikhuselekile xa ithathwa ngomlomo ukuya kuthi ga kwiminyaka emi-4 kunye neenyanga ezi-6. Oku kungqinelana neZiko lezeMpilo leSizwe (i-NIH).
ILovastatin ifumaneka kwiimveliso ezahlukeneyo zerayisi ebomvu. Izixa eziphezulu kakhulu zokukhupha zibangela iintlobo ngeentlobo zeglasi yeerayisi ebomvu njengokulimala kwemisipha nokuwohloka kwesibindi nezintso. I-Lovastatin engenagwele ebomvu irayisi inokubonakalisa iziphumo ezibi ezifanayo.
ICitrinin ikwanokuqulathwa yimvubelo yerayisi ebomvu xa ibile ngokungafanelekanga. ICitrinin yinto enetyhefu kwaye inokudala umonakalo kwizintso. Olunye ugwele obomvu iingxaki zerayisi zinokubandakanya ukutsha kwentliziyo, iintloko kunye nokukhathazeka esiswini.
I-Red Yeast Rice Extract Drug Interaction
Iziyobisi ezisa i-cholesterol
Ngaphandle kokuba kugunyaziwe ngugqirha, akufuneki ukuba uchithe irayisi ebomvu kunye namayeza anokuthoba i-cholesterol. Irayisi ebomvu iyakwazi ukuqinisa ifuthe lala machiza. Oku kwenza umngcipheko wokonakalisa isibindi ube ngaphezulu. Kwimeko yokuba uphantsi kwe-statin okanye naliphi na elinye ichiza lokuthoba i-cholesterol, bonana nodokotela wakho ngaphambi kokuba uthathe irayisi ebomvu.
ICoenzyme Q10 (CoQ10)
Amanqanaba e-CoQ10 angancitshiswa yimimiselo. CoQ10 Kubaluleke kakhulu kwimpilo yemisipha kunye nentliziyo. Ikwanceda kwimveliso yamandla. Ukungabikho kwe-CoQ10 eyaneleyo kunokubangela ukudinwa, iintlungu zemisipha, ukonakala kunye neentlungu. Ukongeza, irayisi ebomvu ilayisi iyanciphisa isixa seQoQ10 emzimbeni. Kwimeko apho ungathanda ukuthatha i-CoQ10 kwaye usebenzisa iigwele ezibomvu zerayisi, buza ugqirha wakho.
Ubisi lweRegayisi ebisiweyo ebomvu
Izongezo eziqulathe igwele elibomvu irayisi zithengisiwe e-US ixesha elide. Banciphisa i-cholesterol kunye nezinye iipilisi kwimithambo yegazi yomntu. Iminyaka edlulileyo apho ulwazi lufumaneka khona ngo-2008 nango-2009. Ukutya okuncedisayo yerayisi ebomvu ebomvu phantse yayithengiswa ngeedola ezingama-20 ezigidi ngonyaka. Ngokuya kuPhononongo lweSizwe lwezeMpilo kuZwelonke ngo-2007, i-1.8 yezigidi zabaphenduli bonke ababengamaMelika basebenzise i-cholesterol esehlisa isongezelelo sezempilo.
Nangona kunjalo kufuneka ulumke xa uthenga ezi zongezo kuba ezinye iimveliso ikakhulu ezivela kubathengisi abangaqhelekanga bezingakhuselekanga. Ezinye zezi zongezo zinokuba nezongcoliso olunokuba yingozi.
Ijusi ebomvu irayisi ikhupha indawo yokuthenga
Ukuba ufuna ukuthenga elona xesha libomvu lesongezelelo leerayisi, ulungiselele ngokukhutheleyo kwi-intanethi kwaye ukhangele inkampani eneminyaka emininzi yamava kwimveliso yezamayeza. Jonga i inkampani otyale imali kakhulu ekuthengweni kwezixhobo zokwenza ubugcisa.
UZhao SP, Lu ZL, et al. I-Xuezhikang, isicatshulwa se-cholestin, sinciphisa iziganeko zentliziyo kwi-2 yezigulana ezinesifo sesifo sentliziyo: Uhlalutyo lwangaphambi kwabaguli abanesifo seswekile 2 esivela e-China Coronary yesibini (CCSPS). J Cardiovasc Pharmacol. 2007 Feb; 49 (2): 81-84.
UPeng D, Fong A, Pelt AV (2017). "Uphando loqobo: Iziphumo zokuNcediswa kweMvubelo yelayisi ebomvu kwiNqanaba leCholesterol kubantu abadala". NdinguJ Nurs. 117 (8): 46-54. .
U-Wang J, Lu Z, Chi J, Wang W, Su M, Kou W, et al. Isilingo seklinikhi yokuvavanywa kwe-serum lipid-ukwehliswa kweziphumo zeMonascus aimureus (igwele elibomvu) ukulungiswa kwerayisi kumayeza emveli aseTshayina. I-Curr Ther Res. I-1997; 58 (12): 964-978.
1.Yintoni I-Yeast Red Rice Extract
2.Uwenza njani umsebenzi weRice yeRast Rice
3.Ngaba irayisi ebomvu ilikhupha ichiza okanye isongezo?
4.IziBonelelo eziNcitshisiweyo zerayisi
5.Red Igwele Rice Kucatshulwe Isikali
6.Irayisi ebomvu iRice Kucatshulwe iziphumo ebezingalindelekanga
7.Irayisi Ebomvu Rice Susa ukuNxibelelana kweziyobisi
I-8 yeRed Yeast Rice Extract izongezo
9.Imvubelo irayisi irayisi isicatshulwa apho ukuthenga